Buluugleey Somali Inormation Service
Golaha Amaanka ee Qarammada Midoobay Ee diiday in Soomaaliya Cunaqabateynta Hubka laga qaado
Buluugleey July 15, 2005
Golaha Amaanka ee Qarammada Midoobay shir ay lahaayeen ayey qoraal ka kooban 3-bog oo ay ku diidanyihiin in haatan Soomaaliya laga qaado cunno qabateynta hubka ay soo saareen. Taasi waxay ka danbeysay markii ay xubno ka tirsan Ururka Midowga Afrika ka codsadeen in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka si ciidamada IGAD loo keeno oo dalka hub iyo saanad fara badanna loo soo geliyo si mar kale xasuuq dalka uga dhaco.
Waxaa kaloo qoraalka Qarammada Midoobay ku xusnaa in xubnaha dowladda KMG ah ee ku sugan magaallada Muqdisho ku ammaanan yihiin dadaalladii ku aaddanaa dhinaca nabadda ee ay ka fuliyeen Gobolka Banaadir taas oo ka mid ahaayeen ciidammadii lagu xareeyey xerooyinka Hiil-Weyne iyo Laanta-Buur iyo weliba qaadista isbaarrooyinka oo sida shrcidarrada ah kala qoqoba isku socodka gaadiidka magaallada Muqdisho.
Ugu danbeyntii wuxuu qoraalka Golaha Amaanka ee Qarammada Midoobay ugu baaqayaa in dadaal aan lagu kala harin lagu raadiyo gacan ku dhiigleyaashii dilay marxuum Cabdulqaadir Yaxye oo ahaa Agaasimihii hay’adda Cilmi Baarista iyo wada Tashiga ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaanno (CRD).
Si kastaba ha ahaatee, Col. Cabdullaahi Yuusuf ayuu go'aanka Golaha Amaanka ku noqonayaa dhabarjab maaddaama uu aad u doonayey in cunnaqabataynta hubka laga qaado Soomaaliya si ciidamo ka socda dalalka IGAD ay Soomaaliya u soo galaan.